Trano fandraisam-bahiny 5 any Berlin | Vaovao momba ny dia
Trano fandraisam-bahiny 5 any Berlin
Mariela Carril | | zavatra ilaina, Berlin
Ny renivohitra Alemanina dia tanàna teraka tamin'ny lavenona imbetsaka hatramin'ny nananganana lavitra tamin'ny taonjato faha-40. Iray amin'ireo tanàna tsy tian'ny mpandeha tsy hita izy io satria tsy isalasalana fa izy no protagonista tamin'ny tantaran'ny taonjato faha-XNUMX. Olona XNUMX taona mahery iza no tsy mahatadidy ny faharavan'ilay Rindrin'i Berlin tamin'ny fahitalavitra, ohatra?
Safidy tsara foana ny trano fandraisam-bahiny Backpacker raha ny amin'ny torimaso amin'ny toerana mora vidy na kely aza, na dia tsy momba ny vidiny fotsiny izany: ny trano fandraisam-bahiny dia toerana tsara hifaneraserana, hifanena amin'ny olona eran'izao tontolo izao, hahazo namana sy mpivady vaovao. Andao hojerentsika avy eo Trano fandraisam-bahiny 5 any Berlin.
1 The Circus Hostel
3 Tanànan'i Hostel Wombat
ny eo afovoan'i Berlin voahodidin'ny trano fisakafoanana, fisotroana, tranombakoka. Manolotra be dia be trano como el efitrano fatoriana. Amin'ity tranga ity dia misy trano fatoriana misy fandriana telo, misy fandriana efatra sy dimy ary misy fandriana valo ka hatramin'ny folo.
Misy efitrano fandriana telo misy fandriana telo mpitovo ary tsara izy ireo rehefa mandeha irery ianao ary te hihaona amin'ny olona. Manana WiFi maimaim-poana izy ireo, locker, efitra fandroana iraisana, jiro famakiana tsirairay, latabatra misy seza ary sarany avy amin'ny 27 euro isan'alina. Ny efitrano fatoriana misy fandriana efatra na dimy dia mitentina 23 euro ary mitovy amin'ny ankapobeny raha toa kosa ny vidin'ny trano fatoriana lehibe kokoa avy amin'ny 19 euro.
Ho an'ireo izay maniry zavatra manokana manokana dia misy trano: ny olona efatra, ny avo roa heny deluxe miaraka amin'ny lavarangana, ny efitrano kely na kambana manokana, ny efitrano tsy miankina tokana, ny efitrano tokana misy efitra fandroana iraisana ary ny efitrano roa misy efitra fandroana iraisana ihany koa. Ohatra, ny efitrano tokana misy vidin'ny fandroana tsy miankina avy amin'ny 56 euro isan'alina. Ary inona ny fotodrafitrasa hafa atolotry ity trano fandraisam-bahiny ity?
Eny, ny maimaim-poana ny sakafo maraina hatramin'ny 1 hariva dia misy WiFi maimaim-poana koa, fandraisana izay mandeha 24 ora, fizahana manaraka (amin'ny 12 ora atoandro), fitehirizana entana, fandriana ahazoana aina, fanofana bisikileta, karatra elektronika, fisotroana ary kafe 24 ora isan'andro, labiera kely nefa tsara ao anaty trano fandraisam-bahiny, hetsika ara-tsosialy, fitsidihana ... Ny trano fandraisam-bahiny dia ao amin'ny Kianja Rosenthaler, ao amin'ny Weinbergsweg, ao amin'ny distrikan'i Mitte.
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia hita ao amin'ny distrikan'i Prenzlauer Berg, voahodidin'ny trano fisotroana kafe sy bara ary afaka mandeha lavitra ny toerana fizahan-tany lehibe an'ny renivohitra Alemanina. Ny rihana dia misy rihana efatra sy tolotra efitrano manokana, efitrano fandraisam-bahiny tokana, avo roa heny, kambana ary mifangaro.
Ny efitrano fatoriana mifangaro dia misy fandriana efatra sy valo ary misy ny zava-drehetra fanafanana afovoany sy mpankafy amin'ny fahavaratra (Mangatsiaka be i Berlin fa tsy tanàna mafana rehefa fahavaratra). Ny kidoro dia manana kalitao tsara, misy jiro tsirairay, efi-tranonao hitehirizana ny entanao sy amin'ny efitrano fandroana rehetra misy fandroana miasa 24 ora isan'andro. Amin'ny lafiny iray dia misy ny trano fidiovana ary amin'ny lafiny iray misy fandroana. Tombanana ho olona fito no mizara trano fandroana.
Tokony ho fantatsika izany tsy misy ascenseur fa misy kosa a zaridaina tsara tarehy sy lehibe miaraka amin'ny fandroana mangatsiaka ampiasaina amin'ny fahavaratra, latabatra, grill ary fandriana fandriana hialana sasatra sy hifaneraserana. Ho an'izany dia misy ihany koa ny efitrano iraisana miaraka amin'ny solosaina misy Skype, miaraka amin'ny mozika, sarintany, lalao ary boky. fanompoana Miasa manerana ny trano ny WiFi ary maimaim-poana. Malalaka sy ampy fitaovana tsara ny lakozia.
Ity trano fandraisam-bahiny ity tsy manaiky zaza tsy ampy taona latsaky ny 18 taona ary amin'ny Internet dia manaiky famandrihan-toerana hatramin'ny olona valo. Toerana madio izy io ary ny sakafo maraina dia manome dite, kafe, serealy ary voankazo im-betsaka araka izay tianao. Miaraka amin'ny politikany tsy hanaiky zaza latsaky ny 18 taona, ny marina dia manana toetr'andro milamina noho ny trano fandraisam-bahiny maro ao an-tanàna.
Tanànan'i Hostel Wombat
Ity hostel ity dia ao anatin'ny gadra misy trano fandraisam-bahiny any Budapest, Munich, Vienna ary London. tolotra WIFI maimaim-poana, valizy misy lakile handao valizy, fitehirizana entana, sakafo maraina miorina amin'ny serealy, mofo, yaorta, fanapahana mangatsiaka, lakozia feno fitaovana sy malalaka, fandraisana 24 ora, fanasana lamba lavarangana ary bara mahafinaritra hitsena ny vahiny rehetra. Ny terrasika dia toerana tsara rehefa milentika ny masoandro ary manana fomba fijery mahafinaritra.
Manolotra ny sampana any Berlin efitrano manokana sy efitrano fandraisam-bahiny mifangaro. Kely ny fanaka fa milay ny koma. Atao isan'andro ny fanadiovana ary misy ny mpankafy amin'ny fahavaratra na dia tsy misy fividianana rivotra aza. Na dia mifangaro aza ny efitrano fandriana dia misy a efitrano fatoriana vehivavy ho an'ny olona enina. Mandany vola ny efitra roa avy amin'ny 53 euro amin'ny vanim-potoana ambany ary amin'ny 76 amin'ny vanim-potoana avo. Ny vidin'ny sakafo maraina dia 4 euro ary maimaim-poana ny WiFi.
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia ao amin'ny Kianja Rosa Luxemburg miaraka amina tram, bus ary lamasinina tena akaiky.
Mitady toerana mangina kokoa? Avy eo ianao dia afaka misafidy an'ity trano fandraisam-bahiny ity Eo amoron'ny lakandranon'i Llandwehr any Kreuzberg no misy azy. Izy io dia miasa amin'ny tranobe taloha, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary somary malalaka kokoa noho ny mahazatra ny efitranony ho an'ny trano fandraisam-bahiny.
Hay efitrano sy efitrano fandraisam-bahiny manokana ary amin'ireo dia tsy misy fandriana fandriana, fandriana mpitovo daholo izy rehetra. Ny efi-trano manokana dia manana efitra fandroana nizara, ao amin'ny faritra mangina kokoa amin'ilay trano ary misy rano mineraly sy Internet. Manana sarany avy amin'ny 29 euro isan'alina. Misy ihany koa ny efitrano kambana tsy misy fandroana manokana 38 euro ary kambana misy fandroana 49 euro.
Misy karazany roa ny efitrano fatoriana: ireo misy fandriana efatra ka hatramin'ny fito misy efitra fandroana iraisana ary ireo misy fandriana valo misy efitra fandroana en-suite. Samy vidiny avy amin'ny 9, 90 euro isan'alina.
Misy efitrano fanasan-damba, lakozia misy fitaovana ary sakafo maraina mahaliana no aroso miaraka amin'ny mofo, kafe, sakafo Arabo sy Mediteraneana ary maro hafa amin'ny vidiny lafo: 6 euro ary iray andro monja dia tsy maintsy mamandrika indray andro ianao. Azonao atao ny mamandrika fitsangatsanganana mpizahatany, amin'ireo faritra mifandraika amin'ny tantaran'ny tanàna na amin'ny alàlan'ny barany aza dia afaka manofa bisikileta ihany koa ianao.
Mazava ho azy fa ao anatiny dia misy efitrano iraisana iray, fantatra amin'ny anarana hoe Tranomboky, miaraka amina boky nefa koa misy bar kely izay manompo ny zava-drehetra sy toerana misy fampisehoana mozika mivantana.
Izany no tsotra amin'ireo trano fandraisam-bahiny ananantsika ankehitriny. Misy ao amin'ny manodidina an'i Mitte, iray amin'ireo tsara indrindra raha ny resaka mandeha miaraka amina kitapo iray eo an-tsorokao no eo akaikin'ny gara S-Bahn Friedrichstrasse.
Izy io dia misy terrasse, tafo ambony sy dobo filomanosana. tolotra fihenam-bidy amin'ny tapakila mankany amin'ny trano fandihizana ho an'ny vahininao, WIFI maimaim-poana sy ny terminal misy azy, ny carte / key, fivarotana enta-mavesatra, efitrano fandraisam-bahiny misy fitoerana sy bar, serivisy fanasan-damba ary fanofana bisikileta. Misy efitrano fatoriana vehivavy misy fandriana efatra, dimy ary valo, ny hafa manana fandriana 16 ka hatramin'ny 24, lehibe kokoa ary koa efitrano manokana tokana, roa, telo ary studio karazana misy fandriana roa, telo ary efatra.
Miasa ny fandraisana 24 ora, tsy misy ny curfew. Niakatra ny vidin'izy ireo hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Jolay ary ambany kokoa eo anelanelan'ny Aogositra sy Desambra. Ny isa ambany indrindra dia amin'ny alahady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Trano fandraisam-bahiny 5 any Berlin
Inona no hitsidika ny Repoblika Tseky
Hotely ranomandry eto an-tany raha te hanana traikefa hafa